ट्रायलमा राखिएको ट्राफिक लाईट नै उल्टो ! - Ratopati
काठमाडौं, बैशाख १०–नियम बनाउने र कार्यान्वयन गर्ने निकायले नै गल्ती गरेपछि त्यसको नतिजा कस्तो होला ? नतिजा पक्कै पनि राम्रो हुँदैन । विषय हो, वीरगंजस्थित यातायात व्यवस्था कार्यालय नारायणीको ।
सवारी चालक अनुमति पत्र लिँदा परिक्षार्थीले दिनुपर्ने ट्रायलमा राखिएको ट्राफिक लाईट कार्यालयले उल्टो राख्दा सेवाग्राहि दुविधामा परिरहेका छन भने सोही लाईटका कारण फेल पनि भईरहेका छन् ।
नियमानुसार सडकमा सवारी चलाउ“दा पहिला पहेलो बत्ति बल्छ जसले सवारी रोक्ने संकेत गर्छ र रातो बत्ति बल्ने वित्तिकै पुर्णत सवारी रोक्नुपर्छ र पुन हरियो बलेपछि सवारी अगाडि बढ्छ । तर उक्त नियम ट्रायल स्थलमा गलत राखिदि“दा सेवाग्राहि फेल हुनुपरेको स्थानीय सद्धाम हुसैनले बताएका छन ।
उक्त समस्याको विषयमा नत यातायात व्यवस्था कार्यालय नारायणीले ध्यान दिएको छ नत ट्राफिकले नै । यस नियम विपरीत लाईटको संकेत चलिरहेको विषयमा बुझ्दा लाईट संकेत ठिकै रहेको दावि गर्छन् यातायात व्यवस्था कार्यालय नारायणीका शाखा प्रमुख शालिग्राम पौडेल ।
नियम पहेलो बत्तिले रोक्न रेडी हुने, रातो बत्तिले रोक्ने र हरियो बत्ति बलेपछि अगाडि बढ्ने नै हो ।
यातायात व्यवस्था कार्यालय नारायणीका शाखा प्रमुख पौडेल पनि यहि बताईरहेका छन् तर बत्ति बल्दा गलत तरिकाले बलिरहेको विषयमा भने ध्यान पुगेको छैन । ट्रायल स्थलमा पहिला रातो बत्ति जस्ले रोक्न रेडी हुने संकेत दिन्छ, पहेलोले रोक्छ र हरियोले अगाडि बढाईरहेको छ । पहिला पहेलो बलेर बल्ल रातो बत्ति बल्नुपर्नेमा पहिला रातो बलेर बल्ल पहेलो बलिरहेको छ । जसले गर्दा ट्राफिक नियमको धज्जी उडेको दृष्यमा प्रस्टै देख्न सकिन्छ र सेवाग्राही परिक्षार्थीहरु पनि फेल भईरहेका छन् । यस विषयमा जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालयका प्रहरी निरिक्षक रविन्द्र भट्टसँग जानकारी लिन खोज्दा आफु बोल्दै नबोल्ने भन्दै पञ्छिए ।
सवारी चालक अनुमति पत्रको ट्रायल स्थलमा यातायात व्यवस्था कार्यालय नारायणी र जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय पर्सा दुवैको प्रतिनिधिको सहभागिता हुन्छ ।
ट्राफिककै अगाडि गलत तरिकाको प्रयोग गरेर ट्राफिकको समेत संलग्नतामा सवारी चालक अनुमति पत्र वितरण गरेपछि उक्त अनुमती पत्र बाहकले सडकमा कसरी सहि नियम पालना गर्ला ?